Qalabka naqshadeynta garaafyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Qalabka naqshadeynta garaafyada
Inta badan naqshadeeyayaasha garaafyada waxay leeyihiin dhowr waxyaalood oo ay wadaagaan, kuwanina waa agabka ay adeegsadaan. Guusha nashqadeeyaha garaafku wuxuu ku xirnaan doonaa si weyn ciyaarta uu ka helo dhammaan agabkan iyo aqoontan.
Qalabku ma noqon karaan waxa ka dhigaya naqshadeeyaha garaafyada mid cajiib ah, laakiin way yihiin. Waxay kaa caawin doonaan jidkaaga inaad noqoto xirfadle wanaagsan. Waxaan soo uruurinay wadar ahaan 8 walxood oo lagama maarmaan ah oo uu u baahan yahay naqshadeeyaha garaafyada.
1 8 qalab oo loogu talagalay naqshadeynta garaafyada
1.2 Wadad adag oo dibada ah
1.3 Qalin iyo warqad
1.4 Hal taleefan
1.8 Jawi shaqo oo raaxo leh
8 qalab oo loogu talagalay naqshadeynta garaafyada
Qalabka naqshadeeye garaafyo wuxuu u baahan yahay isbeddel ku salaysan doorsoomayaal badan, hadday tahay habka ay u shaqeeyaan ama deegaankooda. Laakiin sida caadiga ah Qalabkan aan hoos ku tusayno waa tiirka aasaasiga ah si aad u horumarisid shaqadaada oo aad u sii wadato koritaanka.
Waa mid ka mid ah aaladaha culeyska badan ku leh edbintan, tan iyo qaybta garaafka waxa ay tilmaamaysaa agabka dhijitaalka ah, ha ahaato kombuyuutar ama tablet-ka. Sida qaabka kombuyuutarka, way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan dhadhanka qof kasta, labadaba Apple iyo nooc kasta oo kale waxay leeyihiin kombiyuutaro awood leh oo awood u leh inay ku shaqeeyaan qalabka naqshadeynta. Soo ogow waxa dhabta ah ee aad u baahan tahay iyo waxa aad jeceshahay in kombayutarkaagu haysto. Tani way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan software-ka, agabka iyo agabka.
Laptop ama desktop? Waan ku caawinay
In kasta oo inta badan kumbuyuutarka edbintan uu muhiim u yahay horumarinta shaqooyinka, Waxay sidoo kale kuu adeegi doontaa qaybta cilmi-baarista iyo waxbarashada. Hagaag maanta, dadka intooda badani waxay isticmaalaan dhexdhexaadintan si ay u baaraan shaqada naqshadeeyayaasha kale, ha ahaato tixraac ahaan ama tartan ahaan. Intaa waxaa dheer, internetka waxaad ka heli doontaa tiro badan oo koorsooyin ah oo aad ku kordhin karto xirfadahaaga.
Wadad adag oo dibada ah
Software-ka naqshadaynta ayaa inta badan qaata xaddi badan oo boos ah kombiyuutarkaaga. Taas waa in aad ku darto shaqo kasta oo aad qabanayso, taas oo inta badan qabta qayb kale oo muhiim ah oo ka mid ah kaydinta kombiyuutarkaaga. Tan waxaan rabaa in aan kuu sheego in aad haysato darawal adag oo dibadda ah, Waxay kaa caawin doontaa inaad ka takhalusto kombuyuutarka shaqooyinka laga yaabo inay qaataan waqti dheer oo aan sidaas khusayn. Waxa kale oo ay noqon doontaa mid faa'iido leh in la sameeyo nuqullo koobi ah oo mashaariicda la sheegay ama xitaa haddii aad rabto inaad u xafido xusuus ahaan. Inta badan ee kaydinta kombuyuutarku leeyahay, ayaa sii fiicnaan doonta waxqabadkiisa.
Qalin iyo warqad
Iyadoo ku xiran naqshadeeyaha aad weydiiso, waxay kuu sheegi doonaan in dhexdhexaadintooda ugu weyn ay tahay kombiyuutarka ama warqadda. Horaan ayaan kuugu sharaxay muhiimada ay leedahay in la haysto kumbiyuutar wanaagsan. Laakiin xaashida weli waa taageero muhiim ah. Inkasta oo kombuyuutarku leeyahay kantaroolka caanka ah ee Z, sawirista si macquul ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad si xor ah u siisid fikrado soo baxaya. Mararka qaarkood, isticmaalka aaladaha elektiroonigga ah ayaa naga dhigaya kuwa buuxa oo aan hore u socon karin fikraddayada. Sidaa darteed, way wanaagsan tahay in lagu noqdo habkan dhaqanka ah. Ku sawirida warqad iyo qalin waxay ku siin doontaa xoriyad dheeraad ah.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaan sheego in taleefanku yahay shay muhiim u ah naqshadeeyaha garaafyada. Laakiin qalabkani waa dariiqa ugu dhakhsaha badan ee lagula xiriiri karo macaamiisha iyo naqshadeeyayaasha kale. Sidoo kale Waxay kaa caawin doontaa inaad habayso oo aad hesho dhiirigelin, sababtoo ah waayadan waa naadir website-ka aan lahayn app mobile. Bogagga sida Behance, Pinterest ama Instagram waa isha ugu weyn ee dhiirigelinta.
In sawiro la qaado waqtiyada qaarkood waxay sidoo kale u adeegi doontaa il dhiirigelin ah, waxaa jira waqtiyo aynaan haysan wakhti aan ku sii haysano fikradda, qabashada wakhtigaas waxay naga caawin doontaa inaan dib u soo celino. Haddii aad aragto qoraal, nashqad ama wax aad jeceshahay, waa wakhti fiican inaad sawir qaado. Waxaa laga yaabaa in ubaxa u muuqday mid aad u muuqda marka hore, wuxuu kaa caawin doonaa hadhow inaad abuurto palette midab leh si aad u isticmaasho mashruucaaga.
Buugu waa il aqooneed oo weyn, sababtoo ah wax kasta kama diiwaan gashan internetka. Waa lagama maarmaan in la akhriyo, lafo-gureeyo, oo la barto mar kasta oo aad fursad u hesho. Waxay u badan tahay inaad aqoon badan ka heli doonto buugaag, hagayaal iyo maqaallo ay qoreen xirfadlayaasha kale ee qaybtan. Halkan waxaa ah xiriiriye qoraal ah oo ku saabsan Buugaag uusan naqshadeeye garaafeed joojin karin iibsashada. Iyaga ayaad ku ballaarin kartaa aqoon iyo male naqshadeeye garaaf ahaan.
Un dekeddaafolio es una coleiccon de trabajos in dhabta ahizamos a lo weyno del tiempo, con el si aan u muujino kartideena, xirfadaheena iyo khibradeena. Es una laberey de demOSTrar tus habilidadeska a ka macmiilkaes, en la dhabta ahtay waao es muy muhiim ahe, la tartanxanjo es grande y las qofas seleccionan qusida qodaadan y qusida maya, en saldhig a ka trabajos in leeyahay dhabta ahizbuuqaysaan. Es muy muhiim ahe tjan una buhaa mala awaalen y un buen faylalka, waao te ayudará a in la gkorotada kareemadaa en ti, te de KOOCIIanza y te qutag qodxidhid.
Para hacer mid qumman tsidaes in tjan en cugeli waxaa jirahaa cosace. Te recanadhammaad in te fijes badano en ka dekeddafolmacruufka de ka u sheegñadsaliid, leer boostadayada ku saabsan majaajilloo hacer un buen faylalka, waayo, tjan fikradaha y conocer alqorigaos trucos. Para hacer Konfeedereyshanadaas waxaad u baahan doontaa una página web, es una laberey aad u cajiib ah demOSTrar tu trabGarlic.
Nashqadeeyayaasha, waxbarashadu maaha kaliya waxa aad hesho marka aad ku jirto xirfad ama shahaado. Laakin siyaabaha kale ee lagu sii wado barashada iyo kobcinta. Noocyadan wax-barashadu waxay noqon karaan koorsooyin online ah oo dhammaystira tababarkaaga ama casharrada ku saabsan software-ka, maadaama kuwa dambe la cusboonaysiiyo mar kasta. La socoshada wakhtiga cusub waxay ka dhigi doontaa habkaaga hal-abuurka iyo xirfadahaaga qalabka naqshadaynta dareere badan.
Jawi shaqo oo raaxo leh
Shaqo kasta waa inay haysataa meel aad si raaxo leh oo dhiirigelin leh ugu shaqayn karto. Waxay ku saabsan tahay a shay aad muhiim ugu ah guusha iyo wax soo saarka si loo horumariyo. Deegaankaaga shaqadu waa inuu noqdaa meel bannaan oo iftiin iyo bannaan badan leh. Waxaa lagu talinayaa in aad leedahay daaqado waaweyn iyo dhirta. Lahaanshaha miis weyn ayaa sidoo kale kaa dhigi doonta mid raaxo leh inaad dhigto dhammaan qalabka aad u baahan tahay. Haddi desktop-ku nadiif yahay iyo in kale, taasi adiga ayay kugu xidhan tahay.
Waxaa jira dad si aad uga wanaagsan uga shaqeeya goobtooda shaqo ee qaska ah xitaa haddii ay u muuqato wax cajiib ah. Waxa kale oo lagugula talinayaa in midabada meeshaas ku yaal ay yihiin kuwo soo jiidasho leh oo cad, haddii aad tahay naqshadeeye garaafyo waxaad la socon doontaa Aragtida midabka.
Hadda oo aad ogtahay waxa naqshadeeyaha garaafyada u baahan yahay si uu u horumariyo shaqadooda. Dulqaadka iyo isticmaalka qalabkan naqshadeynta garaafyada, hubaal waxaad noqon doontaa naqshadeeye weyn ama naqshadeeye garaafyo. Horay!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Qalabka naqshadeynta garaafyada